Wasiirka Amniga Puntland oo Fariin digniin ah u diray Alshabab.
Home»Somali News»Wasiirka Amniga Puntland oo Fariin digniin ah u diray Alshabab.
Facebook	Twitter	Thursday, January 03 2013	Wasiirka Amniga Puntland oo Fariin digniin ah u diray Alshabab.	Written by Admin
Add comment	Boosaaso ( SPR ) : Wasiirka Aminga Puntland ayaa ka digay khatar ay Alshabab galiyaanMaamulkooda. Xili ay siyaasado isdiidani ay haatan ka jiraan Deegaanada Puntland.
Khaliif Ciise Mudan Wasiirka AMniga Puntland ayaa isaga oo ka hadlayayshir Amaanka looga hadlayay oo ka dhacay Boosaaso ayuu sheegay in Alshabab kadib markii ay kusoo jabeen Koonfurta Soomaaliya ay haatankusoo wajahan yihiin Deegaanada Puntland.
" Waxaa ay rabaan in ay hoy ka dhigtaan buuraheena casha,taasina wax soconaya ma aha " ayuu yiri Wasiirka Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirka Amniga Puntland Waxaa uu ka digay cid kasta oo khal khal galinaysaAmaanka Deegaankooda in aanay ka yeeli doonin,Waxaana uu shacabka ka codsadayin ay kala shaqeeyaan Amaanka.
Alshabab ayaa farisiino kuleh Buuralayd Gal gala ee Gobolka Bari,iyadoona weeraro hore oo halkaasi ay kasoo qaadeen ay ku dileen Askar ka tirsan Ciidamada Puntland.
Xiisada siyaasadeed ee ka jirta Puntland ayaa dadku ay ka cabsi qabaan in ay dhalisoisku dhac,taasi oo waxyeeli karta Amaankii iyo xasiloonidii ay ku jireen shacabka kala duwan ee deegaanada Puntland.	Social sharing
« Maamulka Gobolka Banaadir oo tababaraya Ciidamo ku filnaada qaadista Canshuuraha Caasimada.	SAWIRO : Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kulankii dhigiisa Dalka Sudan. »